I-Ohana - I-Beachfront Holiday House - I-Airbnb
I-Ohana - I-Beachfront Holiday House
Yeka i-WOW yekhaya leholide…. Pakisha amapotimende akho….
I-Ohana Holiday Home ilinde ukuthi ufike. Ibekwe ngaphesheya komgwaqo osuka ogwini ngokubukwa okuhle okuya e-Dunk Island nangale kwe-Family Group of Islands.
I-Ohana inikezwe ngokucatshangwayo futhi ikuhlomele kahle ukuqinisekisa ukuthi iholidi lakho ngelokubalula nokunethezeka.
Indawo yokudlela evulekile yekhishi ibheka ngaphesheya kwengadi eya eCoral Sea, Dunk Island nangale kwayo. Ungakwazi ukuphumula kuverandi ongaphambili ubuka ngenkathi ubuka izingane zidlala ogwini lolwandle.
Inamagumbi okulala ama-3 kukhona umbhede osayizi wenkosi ekamelweni elikhulu eline-ensuite. Uzojabulela ukuvuka ubheke ekuphumeni kwelanga noma ukubuka inyanga iphuma ngaphesheya koLwandle LwaseCoral njengoba ulele uzwa umsindo wamagagasi egudla usebe. Igumbi lesi-2 linikeza umbhede ophindwe kabili kanti kunombhede owodwa egumbini lesi-3.
Uhlelo olusha oluya ku-Ohana luyichibi lokubhukuda elihle. Lokhu uzokujabulela ukuthatha idiphu ngemva kohambo lwakho lwasekuseni noma kungani ungaphumuli futhi ubukele inyanga iphuma phezu kwe-Dunk Island. Isithombe siphelele....
I-Ohana inikeza isiphephetha-moya. Akukhona ukuthi kuzodingeka i-air conditioning. Vula amafasitela nezicabha futhi uvumele umoya opholile wasolwandle ungene ngaphakathi.
Uma ufisa ukuletha isikebhe sakho uzoba nendawo eyanele yokupaka isikebhe engadini engemuva. Ukukhetha okungu-2 komzila wezikebhe kuyatholakala kuwe. Irempu yesikebhe eseceleni kolwandle noma i-Hull River Boat Ramp zombili ukuhamba imizuzu nje ukusuka e-Ohana.
Siyazi ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho… futhi siyazi ukuthi uzobuya uzohlala futhi e-Ohana…
I-South Mission Beach iyindawo enhle ongavakashela kuyo lapho uphumule ngaphansi kwezihlahla ogwini lolwandle njengoba ubuka i-Dunk Island kuyinto ethokozisayo.
Uma ungumuntu othanda ukuhamba ngesikebhe unenketho ye-2 ramps yesikebhe. Kukhona irempu yesikebhe yasogwini ekugcineni kwe-Kennedy Esplanade noma irempu yesikebhe i-Hull River enikeza ipontoon ongayibopha.
Angifuni ukupheka... I-Mission Thai isendleleni nje... dlela noma uma uhlala e-Ohana - Ibhishi laseSouth Mission sincoma isidlo sakusihlwa futhi udle kuvulandi wakho ujabulele indawo ekuzungezile. Ungase futhi uthande ukujabulela ukudla okukhululekile eTuskers.
I-Woolworths Supermarket e-Wongaling Beach iwuhambo lwamaminithi angu-5 - 10 nje kuphela.
Idolobhana elimangalisayo lezitolo laseMission Beach linikezela ngokukhethwa kwamakhefi, izindawo zokudlela, namabha. Kukhona nesitolo se-Lenny's Local Fruit & Vegetable kanye nesitolo esihle kakhulu. Uzolingeka e-Helen Wiltshire Gallery noma kwesinye sezitolo zemfashini noma zezipho.
I-swimming pool entsha ise-Mission Beach okuhlanganisa ne-hydrotherapy pool.
Indawo yokudlala yamanzi ye-“Dunk and Splash” ingaphambili kwe-Wongaling Beach.
NgeSonto lokuqala nelesithathu enyangeni ngayinye kukhona izimakethe epaki i-Ulysses eMission Beach.
I-Mission Beach Monster Markets ibanjwe ngeSonto lokugcina lenyanga ngayinye kusukela ngeSonto lePhasika kuze kube nguNovemba. Lezi zitholakala nase-Ulysses park eMission Beach.
Kumnandi ukuzulazula ezitolo nasezindaweni zemibukiso.
Phakathi nezinyanga ezilumayo (November kuya kuMeyi) kunendawo evalekile e-South Mission Beach.
Sizotholakala ngosizo oluncane noma oluningi njengoba uludinga. Sesikufonele nje.
Ngiyajabula ukusiza ngokuthi “Okufanele Ukwenze” ngenkathi uhlala e-Mission Beach.